यसकारण हुन्छ पेटको अल्सर ? यस्ता छन् समाधानका उपाय – Halkhabar kura
२८ माघ २०७६, मंगलवार १२:२४
यसकारण हुन्छ पेटको अल्सर ? यस्ता छन् समाधानका उपाय
एजेन्सी । पेटको अल्सर भएमा पेटमा प्वाल पर्ने वा घाउ हुने गर्छ । यस्तो अल्सर विशेषगरी गलत खानपानका कारण हुने हो । सामान्यतया, खाना पचाउने एसिडले आमाशयको पर्खाललाई असर गरेमा अल्सर हुने गर्छ । यस्तो अल्सर पेटको भित्री भागमा, भोजन नली तथा सानो आन्द्रामा विकास हुन्छ ।
पेटको अल्सरलाई पेप्टिक वा ग्यास्टि्रक अल्सरसमेत भनिन्छ । अम्लीयपना, धुमपान वा लागूऔषधको सेवन, अत्यधिक स्टेराइडको प्रयोग, आणुवंशिक कारण, तनाव तथा खानपानको गडबडीका कारण पनि पेटमा अल्सर हुने गर्छ । त्यस्तै, हेलिकोव्याक्टर पाइलोरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण पनि पेटमा अल्सर हुने गर्छ ।
सुरुवाती चरणमा अल्सर पत्ता लगाउन केहि कठिन हुन्छ । तथापि, तल उल्लेखित लक्षण देखिएमा सचेत हुन जरुरी छ :
बारम्बार डकार आउने, पेटमा जलन पैदा हुने, पेटमा घाउ भएको महसुस हुने, पेट फुल्ने, सुन्निने, छाती पोल्ने, ग्याष्ट्रिकको समस्या
शरीरको माथिल्लो भाग दुख्ने वा पोल्ने, तातो खानेकुरा खाएपछि असहज महसुुस हुने, दिशामा रगत देखिने वा दिशाको रङ्ग गाढा हुने
रगत बान्ता हुने, खोकीमा रगत देखिने, वजन कम हुने, खान मन नलाग्ने
अल्सर तीन प्रकारका हुन्छन् । पेटमा हुने ग्याष्ट्रिक अल्सर, भोजन नलीमा हुने एसोफेगस अल्सर, सानो आन्द्रामा हुने डूआडनल अल्सर
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा: अल्सरका विरामीले मसलादार खाना, सुर्तिजन्य पदार्थ, तारेको, भुटेको खानेकुरा तथा माछामासुबाट बच्नुपर्छ । अत्याधिक मात्रामा फलफूल तथा सागसब्जीको सेवन गर्नुपर्छ । यसले अल्सर चाडै निको पार्न सहयोग गर्छ ।
त्यसबाहेक, फोहोर तथा दुषित खानेकुराबाट बच्नुका साथै साबुन-पानीले राम्ररी हात धोएर मात्र खाना खानुपर्छ ।
यदि तपाईले आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न चाहनुहुन्छ भने एक्लै खाना खाँदा उत्तम हुनेछ । एक नयाँ अनुसन्धान अनुसार जो–सुकैले पनि आफ्नो परिवार तथा साथीहरुसँग धेरै मात्रामा भोजन गरिन्छ । जसको कारण तपाई÷हामीले आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न सकिरहेका हुदैनौं ।
अमेरिकन सोसाइटी अफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनमा प्रकाशित एक अध्ययनमा भनिएको छ–‘सामाजिक रुपमा भोजन गर्ने ब्यक्तिले धेरै खाना खान्छन्, तर एक्लै भोजन गर्नेहरुले कयौं गुणा कम खाना÷खाजा खान्छन् ।’
ब्रिटेनको बर्मिघम विश्वविद्यालयको एक रिसर्चर हेलेन रुडाकले भने–‘हामीले यस कुराको पूरै प्रमाण भेटाएका छौं, एक्लै भोजन गर्नेको तुलनामा परिवार तथा साथीहरुसँग भोजन गर्ने धेरै मात्रामा खान्छन् ।’
पछिल्लो एक अध्ययनमा साथी तथा परिवारसँग खाना खानेहरुले एक्लै खाना खानेहरुको तुलनामा ४८ प्रतिशतसम्म बढी खाना खाने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै सामुहिक रुपमा खाना खाने महिलाहरुले एक्लै खाना खाने महिलाहरुको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी खाना खाने गरेको पाइएको छ । यस अध्ययन ४२ जनामाथि मूल्याङकन गरिएको थियो ।
Previous सुनको भाउ आज तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेर ७५ हजार नौ सयमा कारोबार
Next प्रहरी महानिरीक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त